दुई आणविक आक्रमण भोगेको जापानमा अमेरिकाप्रति किन घृणा देखिँदैन ?
१९ फागुन २०७४
टोकियो । अगष्ट १९४५ मा अमेरिकाले जापानका दुई शहरहरुमा आणविक बम खसाल्यो । सो आक्रमणका कारण लाखौँ जापानी नागरिकहरुको ज्यान गयो । साथै, यसले दोश्रो विश्वयुद्ध समाप्त ग¥यो ।
तर, यो विनाशकारी हमलाको बावजुद हाल जापान र अमेरिका राजनैतिक र सामाजिक रुपमा मित्र शक्ति हुन् । सन् २०११ मा सम्पन्न एक सर्भेक्षणमा ८५% जापानीहरु अमेरिकालाई सकारात्मक रुपले हेर्ने देखिएको थियो । जापानमा अमेरिकाप्रति कसरी यो मित्र भावना विकास भयो ?
यसको सबैभन्दा प्रमुख कारणमध्ये एक दोस्रो विश्वयुद्धको समयमा जापानमा सम्राट शोवाको शासन थियो । उनको शासनको समयमा जापानले आफ्नो सैन्य शक्तिमा व्यापक बृद्धी गरेको थियो । यसमा भएको खर्चले जापानमा आर्थिक संकट आएको थियो ।
साथै दोश्रो विश्वयुद्धको क्रममा उनले आफ्नो सेनालाई आत्मसमर्पण वा समातिनुभन्दा आत्महत्या गर्न निर्देशन दिएका थिए । यी कारणहरुले गर्दा शोवालाई जापानी इतिहासमा एक भयानक र अलोकप्रिय पात्रको रुपमा लिइन्छ ।
उनै सम्राटले दोश्रो विश्वयुद्धमा असंलग्न अमेरिकामाथि आक्रमण गरेर उसलाई युद्धमा ताने । त्यस समय अमेरिका र जापान दुवै एक अर्कालाई हराएर कब्जा गर्ने अवस्थामा थिएनन् त्यसैले युद्ध लम्बिने वाला थियो ।
अमेरिकाले आणविक हतियार प्रयोग गर्न हतार गर्नुको अर्को कारण सोवियत संघले १९४५ मा जापानमाथि युद्ध घोषणा गर्नु पनि एक थियो । पश्चिमी मोर्चामा बलियो जर्मनीलाई भर्खरै हराएको सोभियत संघको हातमा जापानलाई जान दिन चाहँदैन थियो, अमेरिका ।
आणविक हमला लगतै जापानी सम्राटले आत्मसमर्पण गरे । त्यसपछिको सात वर्ष जापानमा अमेरिकाको प्रत्यक्ष शासन चल्यो । सन् १९४५ देखि १९५२ बीचको अमेरीकी कब्जाको समयमा जापानको पुनर्निर्माणमा निक्कै ठूलो लगानी भयो ।
आर्थिक लगानीको अतिरिक्त अमेरिकाले जापानको अर्थतन्त्रमा लामो समयसम्म सकारात्मक परिवर्तन पार्ने श्रम अधिकार लागु ग¥यो । उसले तत्कालिन समयमा जापानी अर्थतन्त्रको विकासमा अवरोध गरिरहेको एकाधिकारहरु भङ्ग ग¥यो । साथै अमेरिकाले सो समयमा जापानको विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका रहेको मानिने प्रविधिक र व्यवसाय मैत्री शिक्षाको जग बसाल्यो । सो समयमा अमेरिकाले आफूसँग रहेको प्रविधीहरु जापानसँग बाँढेर उसले हासिल गरेको ‘निर्माण हव’ को बाटो खोलिदिएको थियो ..